Safal Khabar - के तपाईं पत्रपत्रिकामा राखेर खानेकुरा खानुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस्, मसीमा हुन्छन् यस्ता हानिकारक रसायन
के तपाईं पत्रपत्रिकामा राखेर खानेकुरा खानुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस्, मसीमा हुन्छन् यस्ता हानिकारक रसायन
शनिबार, ०४ साउन २०७६, १३ : ४०
एजेन्सी । पत्रपत्रिका वा कागजमा मिठाईहरु राखेर खाने अहिले धेरैको बानी हुन्छ । के गाउँ के सहर प्रायः ठाउँमा पसलेहरू चटपटे, समोसा, पकौडा, पुरी, जेरी, मिठाईजस्ता खानेकुरा अखबारमा बेरेर दिने गर्छन्  । अर्कातिर, धेरै व्यक्ति घरमा खाना प्याक गर्न पनि अखबारै प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तारेका, भुटेका खाद्य पदार्थको तेल सोसियोस् भनेर पनि अखबारमा ती चीज राख्ने गरिन्छ । तर एउटा कुन कुरा हामीले एउटा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने अखबारमा राखिएको कुनै पनि खाद्यपदार्थ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
यिनको थोरै अंशले पनि तपाईं हाम्रो शरीरमा क्यान्सरजस्तो घातक रोग उत्पन्न गर्न सक्छ । अखबारमा राखिएका खाद्यपदार्थ सेवन गर्दा पाचन प्रणाली पनि प्रभावित हुन्छ । अखबारको मसीमा हुने रसायनले गर्दा हाम्रो पाचन प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्छ ।अर्को कुरा, अखबारमा उपयोग गरिने मसी सुकाउन जुन रसायन प्रयोग गरिन्छ, त्यो तैलीय खाद्यपदार्थसँग टाँसिन्छ र खानाका माध्यमले हाम्रो पेटमा पुग्छ । यसले गर्दा फोक्सो र मूत्राशयको क्यान्सर हुने जोखिम बढ्छ । - एजेन्सी